Kaniisadda oo laaluushta shaqaalaheeda aanay bogin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kaniisadda Sweden oo iska shaqaalaha aan loo bogin Foto: Peter Elvemo.
Kaniisadda oo laaluushta shaqaalaheeda aanay bogin
La daabacay tisdag 25 november 2014 kl 09.59
Kaniisadda Sweden ayaa ku xalisa dhibaatooyinka ismaan-dhaaf ee ka dhex dhaca shaqaalaha magdhow shaqo ka tegid. Dhowrkii sanno ee ugu danbeeyey kiisadda Sweden ayaa bixisay lacago kor u dhaafaya 115 milyan oo karoon, lacaghaas oo magdhow ahaan loo baxiyey.
Sidaas waxaa maanta qorey wargeyska Dagens Nyheter. Lacagahan kaniisadda baxisey ayaa intooda badan magdhow ahaan loo siiyey shaqaale ka tirsan kaniisadda oo meel ka dhacyo loo geystey iyo weliba qaarkood qaylodhaan ka keeney wax isdabomarin ay arkeen.
In kaniisadda Sweden dhibaatooyinka ka dhex jira ku xaliso isdhaafinta shaqaalaha aan loo bogin waxay ka horimaaneysaa qiimeynta aas’aasiga ah ee kaniisadda.
Kaniisadda ayaa kooban 700 oo urur diimeedyo shaqo baxiyaal ah. Wargeyska DN aya guud ahaantood xiriir la sameeyey waxna ka weydiiyey magdhowyada ay bixiyeen oo siiyey shaqaale horey xaruumahooda uga howl-geli jirey. 600 oo ka mid ah ururadana ayaa sheegay in tan iyo sannadkii 2010 ay baxiyeen 115 milyan oo karoon oo loo isticmaaley is-dhaafinta shaqaale hore oo aan loo boqin.